Nepali Poetry | SAHADEVISION
नयाँ वर्ष सँगै कविता सङ्ग्रह “माटो र मन”
April 14, 2015 Blog/Slog, Poetryमाटो र मन, Maato ra Mann, Nepali PoetrySahadevision
अन्तत: नयाँ वर्ष सँगै कविता सङ्ग्रह “माटो र मन” प्रकाशित भएको छ।
नव वर्ष २०७२को शुभकामना सहित मेरो पुत्र श्रीमनको साथमा मैले मेरो पुस्तक “माटो र मन” अनलाइन मार्फत अनावरण गरेको छु।
पुस्तक अनलाइन (Amazon.com-http://amzn.to/1OsMflJ ) मा हार्डकपी उपलब्ध छ मूल्य $५ मा। किताब अर्डर गरेको ३/४ दिनमा तपाईँको हातमा पर्छ।
काठमाडौँमा हुनुहुने पाठकहरुले फोन सम्पर्कको भरमा किताब लिन सक्नुहुन्छ। नेपालमा यसको मूल्य जम्मा रु. १५० छ।
न्यु योर्कमा हुनु हुने पाठकहरूलाई पनि हात हातमा पुस्तक पुर्याउने प्रबन्ध छ र मे २ मा सृजनाका यात्राहरुमा म एकल वाचन लिएर आउदै छु।
नव वर्ष २०७२को शुभकामना सहित।नब वर्ष २०७२ को शुभ दिन सँगै मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह “माटो र मन” यसै अनलाइन सञ्जालमा विमो…
Posted by Sahadev Poudel on Monday, April 13, 2015
त्यसै गरी बोस्टन र भर्जिनियामा पनि म आफ्नै कविता वाचनको कार्यक्रम लिएर आउदै छु।
अरू राज्यहरूमा पाठक साथीहरूले जानकारी गराउनु भयो भने किताब तुरुन्तै पठाउन सकिन्छ।
९० पृष्ठको “माटो र मन”मा ६४ वोटा कविताहरू संग्रहित छन्। पुस्तक प्रकाशनको लागि खसखस डट कमले सघाएको हो।
यो बिचमा म मे १८ को दिनमा नेपाली समय अनुसार साँझ ६ बजे र न्यु योर्क समय अनुसार बिहानी ८ :१५ बजे “माटो र मन” बारेमा कुराकानी गर्न Twitter मा आउदै छु, जसलाई नेपालबाट Nepali Bytes ले संयोजन गर्दै छ।
Many thanks to @nepalibytes. Save the date and let's make it engaging. #MaatoRaMann pic.twitter.com/7X5UPO8FPj
— Sahadev Poudel (@Sahadevision) April 12, 2015
मलाई आशा छ , तपाईँहरूको प्रतिक्रिया,सुझाव, साथ् र सहयोगले अझै राम्रो लेख्न प्रेरित गर्ने छ।
रहरै रहरमा “माटो र मन”
March 6, 2015 Blog/Slog, PoetryBOOK, Kabita, Nepali Book, Nepali Kabita, Nepali PoetrySahadevision
कहिले घर देश सम्झेर र कहिले परदेश सम्झेर मनका भावनाका रंगहरुलाई विविध शब्दहरुमा पोख्दा पोख्दै सायद म कवि पो भएँ कि! अहिले म अनलाइन र ब्लगहरुमा छरपस्ट भएका कविताहरुलाई एकमुस्ट पारेर “माटो र मन” शीर्षकको कविता सङ्ग्रहको प्रकाशनको तयारीमा छु र अप्रिल महिना भित्र पाठकहरुको हातमा पर्ने छ मेरो पहिलो कृति।
“माटो र मन” साहित्यिक वेब पत्रिका खसखस डट कमले प्रकाशन गर्दै छ।”माटो र मन”को ईपुस्तक संस्करण अमेजन डट कममा पनि उपलब्ध हुनेछ। साथै केही कविताका अडियो र भिडियो हिमाली स्वरहरुले निर्माण एवं प्रसारण गर्ने छ। पुस्तक प्रकाशनको संयोजन नेपालबाट किताबवालाले गरेको छ।
अहिलेलाई यसै सङ्ग्रहमा भएको कविताहरुको भिडियोहरु
शहर भनेको बगर रहेछ
March 9, 2014 Poetryशहर भनेको बगर रहेछ, Nepali PoetrySahadevision
शहर भनेको बगर रहेछ,
बगरको एक ढुङ्गा भएँ म,
ढुङ्गाको कहाँ रहर हुन्छ र!
शहर भनेको जंगल रहेछ,
जंगलको एक काडँा भएँ म,
काडँाको कहाँ स्याहार हुन्छ र !
शहर भनेको पाताल रहेछ,
पातालको एक सुन्य भएँ म,
सुन्यको कहँा संसार हुन्छ र !
शहर भनेको …..
January 24, 2014 Poetryतिम्रो र मेरो कथा, नेपाली कविता, Nepali Poetry, PoemsSahadevision
पानी पसेको घडी जस्तो जिन्दगी
July 29, 2013 Poetryदाइँका गोरु, पानी पसेको घडी जस्तो जिन्दगी, Nepali Poetry, Nepali Words, Poem About LifeSahadevision
धुम्म बादल लागेको छ,
तै पनि घुमी रहन्छ
दाइँका गोरु जसरी!
धुलो मसिनो बनाउनु छ
र निकाल्नु छ धानका गेडाहरु ।
तर कहिले रोकिन्छ सुईहरु,
अनि रगड्छु आफ्नै शरीरको तातोमा,
र एकैछिन भएपनि हराए जस्तो हुन्छ बादल!
फेरी सुस्त दौडिन्छ तँछाड मछाड गर्दै सेकेन्ड, मिनेट र घण्टाको हिसाबमा!
दौडिदा दौडिदै पर्छ बादलको परिबन्धमा,
अल्झिन्छ पानीका साना साना कणहरुमा,
यसै गरी एक दिन झ्याप्प बन्द हुन्छ जिन्दगी,
पानी पसेको घडी जसरी ।
शब्द र तस्बिर:
मेरो प्यारो मकवानपुर youtu.be/9cdJWdVWy_0 31 minutes ago